खेलकुद – Sanchar Patrika
रोनाल्डोले पेनाल्टी मिस गरेको खेलमा युभेन्ट्स बराबरीमा रोकियो
इटालियन सिरि ए च्याम्पियन युभेन्ट्स फेरि बराबरीमा रोकिएको छ। युभेन्ट्सलाई बुधबार राति भएको खेलमा एटलान्टाले १-१ गोलको बराबरीमा रोकेको हो। जारी सिजनको लिगमा युभेन्ट्सले १२ खेल मध्ये ६ खेलमा बराबरीमा खेलेको छ। बुधबार युभेन्ट्सले फेडेरिको चिएसाको गोलबाट २९ मिनेटमा अग्रता लियो। उनलाई गोल गर्न बेन्टाकुरले पास उपलब्ध गराए। ५७ मिनेटमा एटलान्टाले बराबरी गोल फर्काउन सफल भयो। उसका लागि रेमो फ्रयूलरले बराबरी गोल गरेका थिए।त्यसको चार मिनेटपछि युभेन्टसले पेनाल्टी प्रहारको अवसर पाएको थियो। युभेन्ट्सका चिएसालाई फलउ गरेपछि प्राप्त पेनाल्टी स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले प्रहार गरेका थिए। तर एटलान्टाका गोलकिपर गोलिनीले रोनाल्डोको प्रहारलाई बिफल पारिदिए। गोलिनी जनावरी २०१९ पछि रोनाल्डोको पेनाल्टी विफल पर्ने पहिलो गोलकिपर बने। लिगको अन्य खेलमा शीर्ष स्थानको एसी मिलानलाई जिनोआले २-२ गोलको
मंहगो पारिश्रमिक लिएर नेपाली टिमको कोच बन्दै डेभ वाटमोर
काठमाडौँ : नेपाली क्रिकेट टोली झण्डै पछिल्लो एक वर्षयता मुख्य प्रशिक्षकविहीन छ । तत्कालिन प्रशिक्षक उमेश पटवालले आईसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गतको पहिलो सिरिज काठमाडौँमा सम्पन्न भएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नयाँ प्रशिक्षक खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । तर, १० महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रशिक्षक नियुक्त गर्न सकेको छैन । त्यसोत, चैत महिना यता नेपाली खेलकुद नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण स्थगित भयो । मंसिर दोस्रो साताबाट नेपाली क्रिकेट टोली बन्द प्रशिक्षणमा छ । प्रशिक्षकको जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रशिक्षक जगत टमटाले सम्हालिरहेका छन् । क्यानले प्रशिक्षक छनोटका लागि आवेदन सार्वजनिक गर्दै अन्तिम ३ जनाको नाम छनोट गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) मा पठाएको छ । क्यानले छनोट गरेका तीन जनामा देव ह्वाटमोर, अपूर्
एजेन्सी, १५ मंसिर । क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले ओसासुनाविरुद्धको आफ्नो गोल अर्जेन्टिनी मिडफिल्डर डिएगो म्यारोडोनालाई समर्पण गरेका छन् । अर्जेन्टिनी टोलीका कप्तान समेत रहेका मेस्सीले ओसासुनाविरुद्ध ७३औं मिनेटमा टोलीका लागि चौथो गोल गरेका थिए । मेस्सीले गोल गरेपछि खुसियाली मनाउने क्रममा आफूले भित्र लगाएको म्याराडोनाकै पुरानो जर्सी देखाएर उनलाई समर्पण गरेका थिए । खेलमा बार्सिलोनाले ४-० को सहज जित निकालेको थियो । ओसासुनामाथिको जितमा मेस्सीसँगै मार्टिन ब्रेथवेट, एन्टोइन ग्रिजमन र फिलिपे कौटिन्होले गोल गरेका थिए । खेलपछि सामाजिक संजालमा पनि मेस्सीले आफू र म्याराडोनाको तस्बिर जोडेर ‘सधैं सम्झिरहेने छौं‘ लेखेका छन् । हृदयघातका कारण गत बुधबार महान अर्जेन्टिनी महान् फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा नि'धन भएको थियो । विश्व फुटबलकै महान् मध्यमा गनिने म्यार
आइपीएलको उपाधि जितेको मुम्बईले पायो २० करोड, रनरअप दिल्लीको नगद पुरस्कार कोहलीभन्दा ४.५ करोड कम
आइपीएलको १३ औं सिजनको फाइनलमा मुम्बई इन्डियन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएर रेकर्डस्तरको पाँचौं पटक उपाधि जित्यो । यससँगै मुम्बईले ट्रफीसँगै २० करोड भारु र दिल्लीले १२.५० करोड भारुको नगद पुरस्कार पायो । रनरअपको नगद पुरस्कार खेलका सबैभन्दा महँगा खेलाडी विराट कोहलीले पाउने रकमभन्दा कम छ । बोर्ड अफ कन्ट्रोल फर क्रिकेट इन इन्डियाले यो वर्षको नगद पुरस्कारलाई आधा गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन पछि फेरिएको थियो । रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का कप्तान विराट कोहलीलाई फ्रेन्चाइजीले एक सिजनका लागि १७ करोड भारु दिन्छ । यद्यपि, सीजनको लीलामीमा अष्ट्रेलियाली तेज बलर पेट कमिन्स सबैभन्दा महँगा १५.५ करोड भारुमा बिकेका थिए । उनलाई कोलकाता नाइट राइडर्सले खरिद गरेको थियो । कमिन्स सबैभन्दा महँगा विदेशी खेलाडी पनि हुन् । म्यान अफ द म्याच ट्रेन्ट बोल्टलाई ५ लाख भारु नगद पुरस्कारः सुन्तला र
आईपीएल फाईनल आज, कस्ले जित्ला उपाधि ?
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को जारी संस्करणको फाइनल खेल आज (मंगवार) हुँदैछ। यूएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आज साँझ हुने खेलमा गत वर्षको विजेता मुम्बई इन्डियन्स र आईपीएलको फाइनलमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको दिल्ली क्यापिटल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बई लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने दाउमा रहेको छ भने नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली इतिहास रच्ने लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रिदैछ। सन्दीप भने सिजनमा मैदान उत्रने मौका पाएका छैनन् । दुवै टोलीबीच यसअघि बिहीबार भएको क्लालीफायरमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यतिबेला दिल्लीलाई ५७ रनले पराजित गर्दै मुम्बईले फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो। तर पराजित भएपछि शुक्रबार दिल्ली इलिमिनेटरको विजेता टोली सनराइजर्स हैदराबादसँग खेल खेलेको थियो। जित्नै पर्ने उक्त खेलमा हैदराबादलाई १७ रनले पराजित गर्न सफल भएपछि दिल्लीले फाइ
काठमाडौं । पेरिस सैन्ट जर्माइनका फरवार्ड नेयमारमाथि दुई खेलको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आइतबार सम्पन्न खेलमा नेयमारले मरसिलिका खेलाडी अल्भारो गोञ्जालोजसँग खराब आचरण प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीमाथि दुई खेलको प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।ब्राजिली खेलाडी नेयमारले भने गोञ्जालोजले सामाजिक सञ्जालमा नश्लभेदी टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका छन र त्यसको अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेका छन । गोञ्जालेजले नेयमारको दाबी अस्वीकार गरेका छन । उक्त खेलमा पाँच जना खेलाडीहरुले रातो कार्ड पाएका थिए । सेन्ट जर्माइनका डिफेन्डर लेभिन कुर्जवालाई छ खेलको लागि निलम्बन गरिएको छ ।अर्का खेलाडी लिओनार्दो पारेड्समाथि दुई खेलको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मरसिलिका जोर्डन अमाबीलाई तीन खेलको लागि निलम्बन गरिएको छ । डारिओ बेनेडेट्टो तीन खेल बाहिर बस्नुपर्नेछ ।फ्रान्समा ब्यवसायिक फुटबल सञ्चालन गर्ने निकाय लिग डे फुटबल प्रोफेशनलले नेयमारको दाबीबारे अनु
आईपीएलको खेलतालिका सार्वजनिक, उद्घाटनमा मुम्बई र चेन्नई भिड्ने
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले आइतबार १३ औं संस्करणको प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो । खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले चेन्नई सुपर किङ्ससँग खेल्नेछ । उद्घाटन खेल सेप्टेम्बर १९ मा अबुधाबीमा हुनेछ । कोरोना भाईरसको कारण आईपीएलको १३ औं संस्करण युएईमा आयोजना हुँदैछ । आईपीएल सेप्टेम्बर १९ देखि नोभेम्बर १० सम्म हुनेछ । लिग चरणको २४ खेल दुबईमा हुनेछ । यस्तै २० खेल आबुधावी र १२ खेल सारजाहमा हुनेछ। प्ले अफ र फाइनल खेलको तालिका र भेन्यु भने सार्वजनिक गरिएको छैन । हेर्नुहाेस खेल तालिका
फाइनलमा पराजित भएसँगै पीएसजीका स्ट्राइकर नेइमार भावुक भएर आँसु झार्दै बाहिरिए ! (भिडियाे)
काठमाडौं, ०८ भदौ । च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पराजित भएसँगै पीएसजीका स्ट्राइकर नेइमार भावुक भएर आँसु झार्दै बाहिरिएका छन् । गएराति भएको फाइनल खेल सम्पन्न भइसकेपछि खेलमैदानमा बिपक्षी टिमका खेलाडीहरुसँगा अङ्कमाल गर्दैगर्दा नेइमारले आँसु झार्दै गरेको दृष्य देख्न सकिन्छ । बायर्न म्युनिख सँग नेइमार आबद्ध टिम पीएसजी फाइनल खेलमा १-० ले पराजित भएको थियो । स्थापना कालको ५० औँ बर्षमा पहिलोपटक फाइनलमा पुगेको थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा उपाधि जित्ने अपेक्षा गरेका नेइमार सहित टिमका अन्य सदस्यहरु पनि नेइमारको आँसुमा भावुकता प्रकट गर्दै निरास भएका थिए । पीएसजीका भरपर्दा खेलाडी नेइमारले आफ्नो संबद्धतामा क्लबलाई उपाधि जिताउन चाहन्थे । तर बायर्न म्युनिखसँग पराजित भएसँगै उनको सपना चकानाचुर भएको छ । ब्राजिलियन राष्ष्ट्रिय टिमका खेलाडी नेइमारले पीएसजीलाई फाइनलसम्म पुर्याउन ठूलो योगदान गरेका छन् । तर
काठमाडौं, ०८ भदौ । च्याम्पियन्स लिगको उपाधि बेभरियनल क्लब बायर्न म्युनिखले जितेको छ । गएराति भएको फाइनल खेलमा बायार्न म्युनिखले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी)लाई १-० गोलले पराजित गर्दै उपाधि कब्जा गरेको हो । बायर्नको च्याम्पयिन्स लिगको उपाधि कब्जा यो छैटौं पटक हो । पोर्चुगलकाे राजधानी लिस्बनमा भएको फाइनल खेलमा बायार्नको जितका लागि एक मात्र गोल किंग्स्ले कोमानले गरेका थिए । उनी खेलको ५९ औं मिनेटमा गोल गर्न सफल भएका थिए । जोसुवा किमिचले दिएको पासलाई कोमानले हेडमार्फत गोल गरेका थिए । निकै प्रतिस्पर्धामक बनेको खेल पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको थियो । स्टार खेलाडीहरुले भरिएको पीएसजी खेलका नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा भएपनि लोकप्रीय टिमलाई पराजित पार्दै आएको र बिगतमा धेरै पटक उपाधि कब्जा गर्दै आएको बायर्नले उच्च मनोवलका साथ प्रस्तुत हुँदा जित आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो ।
काठमाडौँ । इटालियन क्लब युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरएको छ । गएराती सम्पन्न च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को दोस्रो लिगमा युभेन्टस फ्रेन्च क्लब लियोनमाथि २-१ गोल अन्तरले विजयी भएपनि समग्रमा २-२ गोल को नतिजासहित अवे गोलको आधारमा बाहिरिएजो छ । पहिलो लिगमा अवे गोल गरेको आधारमा लियोन च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । युभेन्टसका दुवै गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गर्दै जित दिलाएपनि क्वाटरफाइनलमा भने पुर्याउन सकेनन् । रोनाल्डोले खेलको ४३औ र ६०औ मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यस्तै लियोनका लागि भने मेम्फिस डिपेले पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका थिए । योसँगै लियोनले क्वाटरफाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीको सामना गर्ने भएको छ भने युभेन्टसको च्याम्पियन्स लिगको यात्रा टुंगिएको छ ।